IVolkswagen entsha yeFashion neMidlalo, iSitayile saseTshayina
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IVolkswagen entsha yeFashion neMidlalo, iSitayile saseTshayina
NgoSeptemba ka-2021, uKhuphiswano lokuSebenza kweMoto yeMveliso yaseChina (emva koku lubizwa ngokuba yiCCPC), olusingathwe yiAutoCulture, lwafikelela esiphelweni kwisiXeko saseLianyungang, kwiPhondo laseJiangsu. Phakathi kwabo, i-FAW-Volkswagen Audi A3L, enye yeemodeli ezintathu ezilungileyo zentsapho yaseJamani, iphumelele indawo yokuqala kwi-insulation yesandi kunye nezifundo zokunciphisa ingxolo kunye nokusebenza kwayo kwemveliso. Ikwakukhuphiswano olubanzi lwentsebenzo nakwizifundo zovavanyo lwe-elk. Bobabini baphumelele ubuntshatsheli kwaye baphumelela ngempumelelo iwonga elithi "Triple Crown" kwisikhululo sobuchwephesha.
I-Audi, njengenye yeenkosi ezintathu zaseJamani, ibisoloko ilukhetho olulangazelelayo kubathengi. Ngenkangeleko yayo enesitayile kunye nolawulo lwamandla olunamandla noluthembekileyo, itsale inkoliseko yolutsha oluninzi. Nangona kunjalo, kwimbono yabantu abaninzi, i-Audi ibhalwe ngokuthi "i-luxury", "indleko", kwaye "ingenakufikeleleka". Ngaba oku kunjalo ngokwenene? Enyanisweni, kukho iimodeli ezininzi ze-Audi e-China namhlanje, ziphakamisa ukusebenza kwemveliso ebalaseleyo, kodwa ixabiso liyangeneka. Ngokomzekelo, i-Audi A3L esiza kuthetha ngayo namhlanje, njengeyona nto iphambili kwiintengiso zentsapho ye-Audi, awusoze ulindele ukukwazi ukuyithenga ngexabiso le-yuan ye-180,000. Kwimoto eyothusayo.
Imfashini kunye nezemidlalo zihlala, ukhetho lokuqala lwabantu abancinci
Kwimarike yabathengi beemoto apho abantu abatsha bahlala kwindawo eqhelekileyo, ukuba nembonakalo yexabiso eliphezulu kuthetha ukuqala kwempumelelo. Uluvo lomoya kunye nefashoni ibe lulwazi olubalulekileyo lwereferensi kukhetho lwabo lokuthenga imoto. Kule nkalo, njengoluhlu lweklasi ye-FAW-Volkswagen Audi, i-FAW-Volkswagen Audi A3L inokuthi ibambe ngokuqinileyo ingqondo yabathengi.
Le moto isekelwe kumxholo othi “uyilo lwefashoni” ukusukela oko yaqalayo, isebenzisa ulwimi lwamva nje loyilo lwefashoni yosapho lakwa-Audi RS. Ukujonga ukusuka ngaphambili, i-iconic classic hexagonal air intake grille yosapho lwe-RS, kunye ne-honeycomb emnyama yokuhlobisa i-chrome, igxininisa ubuhle kunye nomoya; Ukungena komoya kujikeleze macala omabini ebhampa yangaphambili kwaye izibane ezibukhali ze-LED zihambelana enye kwenye. Uxinzelelo olubonakalayo lukhutshwa ngowona mlinganiselo mkhulu, kwaye aliphulukani negama “lomzi-mveliso wokukhanya” wakwa-Audi; imigca yecala lomzimba ibukhali kwaye igcwele imvakalelo yezemidlalo, ukusuka kwi-taillights yangasemva ukuya kuhlobo lwe-waistline ebukhali eyandisa izibane, ukuze yonke imoto ibonakala ibonise ubuhle obubonakalayo kunye nengqiqo yokulungiswa. Phakathi kweemodeli zezinga elifanayo, i-FAW-Volkswagen Audi A3L inokuthi imele i-pinacle yembonakalo kwaye ifaneleke kakhulu kubathengi abaqhuba imfashini yolutsha kunye nemidlalo.
Isulungekisiwe ngakumbi kwaye ikhululekile, isenza i-Audi A3L isondele ngakumbi
Njengoko eli lizwi lihamba, isitayile sangaphandle senzelwe ukuba abanye babone, kwaye ingaphakathi yindawo eya kuhamba nawe ixesha elide. Ngokukodwa kwimoto yosapho edibeneyo, kufuneka ikwazi ukubonelela ngendawo yokuqhuba enenkathalo kunye nekhululekileyo kubomi bemihla ngemihla ngaphambi kokuba ithandwa ngabathengi. Oku kwakhona i-FAW-Volkswagen Audi A3L ethengisa ixesha elide kwimarike yemoto yosapho. esinye sezizathu.
Ukuze ihambelane ngakumbi nokubekwa kwemoto yosapho, i-FAW-Volkswagen Audi A3L wheelbase iye yandiswa nge-50mm, ukuze kungabikho ngxaki kumqolo wesibini wabakhweli ukutshekisa imilenze yabo. Ngokwesiseko soyilo lwefonti, ukusetyenziswa ngobuchule kweziphene, iifom eziphakamileyo neziphantsi ukubonisa ubuhle boshishino lwanamhlanje, kwaye emva koko zidityaniswe nezikrini ezibini ezikumgangatho ophezulu, umhombiso wechrome kunye nesitayile somoya esifana ne-Urus, ingaphakathi lihlanjululwe. . Kunokuthiwa kubethwa.
Ngubani owathi i-compact sedan ayinakusukela i-gallop kunye nomdla?
Uninzi lweemoto zosapho ezixineneyo zilandela ukunethezeka kunye nokuphatheka, kodwa zihlala zingawuhoyi umba wokusebenza kwaye azikwazi ukunika umqhubi amava okuqhuba egalloping. Emehlweni esizukulwana esincinci sabathengi, oku akwamkelekanga kwaphela. Ukuba ufuna ukuphishekela ulonwabo lwesantya kunye nothando ngokubeka i-compact sedan, mhlawumbi i-FAW-Volkswagen Audi A3L ifanelekile.
Nangona i-FAW-Volkswagen Audi A3L ibekwe njengemoto yosapho ehlangeneyo, kunye ne-injini ye-EA211 1.4T + 7-speed dual-clutch gearbox ixhotyiswe akukho nto inokuyithetha ngokweparameters, inokubonelela nge-torque ephezulu ye-250N·m. kunye namandla aphezulu angama-110KW. Inokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zokusebenza zokuqhuba kwabantu abatsha mihla le. Ngaphezu koko, i-FAW-Volkswagen Audi A3L ineziko eliphantsi lomxhuzulane, ubunzima obungaphumiyo obukhaphukhaphu kunye nokunqunyanyiswa kwe-chassis engqongqo, okuzisa ukusebenza kwe-chassis yayo kwinqanaba eliphezulu, ivili lokuqhuba likhomba ngokuchanekileyo ngakumbi, kunye neengoma zevili elingasemva xa isithuthi sijika. ngokukhawuleza. Ukulandeleka kwakhona kuchanekile ngakumbi, kunye nolonwabo lokuqhuba oluphezulu kakhulu!
Kwenzeka nje ukuba i-FAW-Volkswagen Audi A3L ithathe inxaxheba kukhuphiswano lwesikhululo sikawonke-wonke seCCPC ka-2021 ngeli xesha. Ngemveliso yamandla ekumgangatho ophezulu kunye nokulungiswa kwe-chassis enamandla, inokunika umqhubi uyolo lokuphalaza nokuba iqala isantya okanye ikona. Ke ngoko, ukuba ufuna ukukwazi ukulandela isantya kwaye ukonwabele ulonwabo lokuqhuba ngelixa usanelisa ukuhamba kwemihla ngemihla, i-FAW-Volkswagen Audi A3L lukhetho lwakho olugqibeleleyo.
Ngokubanzi, i-FAW-Volkswagen Audi A3L inomgangatho obalaseleyo ongenakubanjwa ziimoto ezifanayo kwiinkalo ezininzi. Ukubonakala kwayo okuphezulu, induduzo kunye nokusebenza okunamandla kuhambelana nayo, kwaye oku kukwazi ukukhokela kwintsimi ye-sedan yasekhaya. Isizathu kukuba le moto nayo iza kuthandwa ngabantu abaninzi.
Le moto isekelwe kumxholo othi “uyilo lwefashoni” oko yaqalayo, isebenzisa ulwimi lwamva nje loyilo lwefashoni yosapho lakwa-Audi RS. Ukujonga ukusuka ngaphambili, i-iconic classic hexagonal air intake grille yosapho lwe-RS, kunye ne-honeycomb emnyama yokuhlobisa i-chrome, igxininisa ubuhle kunye nomoya; Ukungena komoya kujikeleze macala omabini ebhampa yangaphambili kwaye izibane ezibukhali ze-LED zihambelana enye kwenye. Uxinzelelo olubonakalayo lukhutshwa ngowona mlinganiselo mkhulu, kwaye aliphulukani negama “lomzi-mveliso wokukhanya” wakwa-Audi; imigca yecala lomzimba ibukhali kwaye igcwele imvakalelo yezemidlalo, ukusuka kwii-taillights zangasemva ukuya kuhlobo lwe-waistline ebukhali eyandisa izibane zangaphambili ukuze yonke imoto ibonakala ibonise ubuhle obubonakalayo kunye nengqiqo yokulungiswa. Phakathi kweemodeli zezinga elifanayo, i-FAW-Volkswagen Audi A3L inokuthi imele i-pinacle yembonakalo kwaye ifaneleke kakhulu kubathengi abaqhuba imfashini yolutsha kunye nemidlalo.